Nagu saabsan - Cixi Guanghua Industrial Co., Ltd.
Kooxda Wisecraft waxay leedahay in ka badan 30 sano taariikh, khibrad u leh ganacsiga qalabka.
Shirkadeena ayaa mar horaba hogaamiye ka aheyd aaggan, gaar ahaan godka godka laga qodo.
10-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan sidoo kale soo saarnay badeecooyin kale oo waaweyn, sida "xirtaan saxanka birta adkaysi u leh", "mashiinka nadiifinta uumiga buuxa", iyo "mashiinka mashiinka hawada" iwm.
Kooxda Wisecraft waxay ku taal aagga dhaqaalaha ugu firfircoon Shiinaha, Cixi magaalada, Ningbo ee Zhejiang, Hangzhou Bay.
Ilaa Ningbo 60KM.
Ilaa Shanghai 130KM.
Ilaa Ningbo 60KM
Ilaa Shanghai 190KM
Waxaa la aasaasay: 1988
Nooca Ganacsiga: OEM & ODM warshad
Aqoon-isweydaarsi: Qalabaynta, Balaastigga, Hole miinshaar, xoogaa kaashawiito, Birta, Daaweynta kuleylka, Xirxirida, iwm.
Shaqaalaha: Ku dhowaad 1000 qof
Bedka dhulka: 200,000㎡
Aagga wax soo saarka: 130,000㎡
Cirbad & Afuufid
Alaabtayada waxaa laga heli karaa Home Depot, Lowe's, Canadian Tire, OBI, Bauhaus, B&Q, Leroy Merlin, Bunnings, iyo tafaariiqleyaasha kale ee waaweyn ee adduunka.
Sidoo kale waxaan leenahay wada shaqeyn nooc iyo qoto dheer leh nooca Top 3 ee aaggan.
Waxaan ku xoogannahay Hal-abuurnimada iyo Dhiirrigelinta.
Badeecada aan ugu talagalnay macaamiisheena:
ku guuleystay Abaalmarinta Naqshadeynta Alaabada Jarmalka "HADDII"
wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta "Naqshadeynta Baakadaha" Jarmalka
ku saabsan Abaalmarinta "IF"
Sannad kasta, Benz, BMW, IBM, LG, Samsung & Sony, iwm shirkado caan ah ayaa isugu imaan doona abaalmarinta "IF". Waxaa loogu yeeraa abaalmarinta "OSCAR" aagga naqshadeynta.
Abaalmarinta "Naqshadeynta Baakadaha"
Abaalmarinta Baakada Jarmalka waa tartanka ugu caansan ee waxqabadka baakadaha ee Yurub. Qabanqaabiyaha tartanka waa Machadka Baakadaha Jarmalka ee Berlin.
1. Hole arkay: heer tayo oo kala duwan oo leh ujeedo shaqo oo ku saabsan jarista Birta, Dhagaxa, Qoryaha. In ka badan 15 milyan oo kumbuyuutar / sanadkiiba.
2. Qalabka Hole wuxuu arkay: naqshad aad u fiican, habka wax soo saarka qaangaarka ah, iyo QC adag oo dhan.
In ka badan 7.5 milyan kumbuyuutar / sanadkii.
3. Saamaynta & Heerarka kawaabyada caadiga ah: In ka badan 150 milyan oo kumbuyuutar / sanadkii.
4. Qalabka PTA & Qalabka Qalabka Gacanta: In ka badan 6 milyan oo nooc / sanadkiiba.
Deegaanka wada noolaanshaha:
nidaamka daaweynta biyaha khasaaray
gaaska qiiqa, qiiqa iyo nidaamka daaweynta ceeryaanta aashitada
Nidaamka Awoodda Qoraxda
Shahaadada: ISO9001, BSCI